नेपाल हाउसको एजेन्डा सफल भयो - एनआरएन आइसिसि प्रतिनिधी कुँवर :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
गैर आवसिय नेपाली संघ (एनआरएन) कोरियामा दोस्रोपटक अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भइ हाल आइसिसि प्रतिनिधीमा निर्वाचित एनआरएन कोरियाको निवर्तमान अध्यक्ष विनोद कुँवरसँग हेल्लो नेपालकोरिया डटकमका लागि सरोज खड्काले गरेको कुराकानी ।
१. एनआरएन कोरियामा अध्यक्षको रुपमा तपाईको दोस्रो कार्यकालको अनुभव कस्तो रह्यो ?
बिगतमा अनुभव भएको हुँदा त्यो अनुभवबाट काम गर्ने हिसाबले म आएको थिए । नेपाल हाउसको एजेन्डा सफल भयो । त्यो सबै मिलेर गरियो । कोरियामा रहेका सबै संघसंस्था तथा नेपालीहरुको सहयोग रह्यो । यो कामबाट सन्तुष्ट छु । नेपालको महाभूकम्पको बेला हामीले सकेको सहयोग गर्यौ । त्यो भन्दा पहिले नेपालमा भएको प्राकृतिक विपत्तिको बेला सुनकोशी बाढीपिडितहरुलाई सहयोग गरियो । अनिस खालिङ्ग राई बचाउ अभियानमा सहयोग गरियो । एनआरएनको वेवसाइट पनि बनाइयो । स्वास्थ्य शिबिरका कामहरु पनि भएका थिए, नेपाल हाउसमा । समग्रमा एनआरएन कोरियाले सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय भएर काम गर्यो मेरो कार्यकालमा ।
२. पछिल्लो समय निकै विवादित हुनुभयो नि ?
अधिवेशनको बेला विवाद देखिएको थियो । सदस्यता वितरणमा कमी कमजोरी भएको हो । भूकम्पको कारणले अधिवेशन ढिला भएको र पहिलो अधिवेशनको मिति सार्नुपर्यो । एउटै व्यक्तिले ४/५ सय फर्म लिएर आउँदा समस्या भयो । कोरियामा २ वर्ष कटेको हुनुपर्ने तर त्यो भन्दा कम समयको पनि फर्म आएको हुँदा त्यो प्रमाणिकरण गर्न समय लाग्ने भएको भएर अर्को मिति तोकेका थियौ ।
३. निर्वाचन कमिटीका पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ?
संरक्षक जस्ता व्यक्तिहरुले राजीनामा दिनुभयो । उहाँहरुलाई बाहिरबाट दबाव आएको हुन सक्छ । उहाँहरुलाई हामीले भोटिङ लिस्ट समयमै दिन सकेका थिएनौ । हामीबाट पनि कमी कमजोरी भए । यो कमिटिलाई असफल बनाउनुपर्छ भन्ने पनि सोच आएर त्यो अवस्था आयो ।
४. पाँचौ अधिवेशनको आर्थिक प्रतिवेदनका बेला झगडा समेत भएको देखियो । आर्थिक पारदर्शिता नभएको आवाज उठ्यो नि ?
अघिल्लो कमिटिबाट १ करोड ५० लाख वन तिर्न बाँकी हाम्रो भागमा परेको थियो । त्यो रकम हामीले तिरिदियौ । त्यो के मा खर्च भयो भन्ने विषयमा विवाद निस्किएको थियो । बाँकी अन्य नेपाल हाउस सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण नेपाल हाउस व्यवस्थापन समितिले पारदर्शी रुपमा राखेको छ ।
५. खर्च सम्बन्धि विवरण पारदर्शी नभएको हो ?
अझै पनि पारदर्शीता हेर्नको लागि नेपाल हाउस व्यवस्थापन समितिले बृहत भेला राख्छ । त्यहाँ आएर हेर्न सकिन्छ ।
६. एनआरएनको सदस्यहरु वृद्धि भयो यसमा सदस्यता शुल्क चाहि अरुले तिरिदिएर बढेको भन्ने कुराहरु आएको छ नि ?
यो कुरा नै मुख्य समस्या भयो अहिलेको अधिवेशनमा । एक व्यक्तिले धेरैको फर्म लिएर आएर पैसा हालिदिएर यस्तो समस्या आएको हो । त्यसमा हाम्रो कमजोरी नै भन्नुपर्छ । यो व्यवस्था पहिला पनि थियो । तर अब यसले समस्या देखिएकोले सदस्यता लिन चाहानेले आफै आएर फर्म भर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । टाढाबाट आउने व्यक्तिले बढीमा १० जनासम्म मात्र फर्म भर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
७. तपाईले पनि अरुको सदस्यता शुल्क तिरिदिएको भन्ने कुराहरु आएको थियो नि ?
मैले त्यस्तो गरेको छैन । चिनजानको मान्छेले पछि दिन्छु भन्ने हिसाबमा मात्र मैले हालिदिएको हो ।
८. चुनावपछि अहिले एनआरएनको गतिविधि केही पनि देखिएको छैन नि ?
यसमा अहिलेको कार्यसमितिका साथीहरुको आफ्नै समस्या होला । दशैं कार्यक्रम जुन एनआरएन कोरियाले गर्दै आएको थियो त्यो यसपाली भएन । त्यो उहाँहरुको कमजोरी देखियो । उहाँहरुलाई आफ्नो योजना एजेन्डाहरु बनाउन समय लाग्ला । पछि गर्नुहोला नि ।
९. तपाई एनआरएनको अध्यक्ष भएपछि लगानीको काम लिएर आउँछु भन्नुहुन्थ्यो तर सक्नुभएन नि ?
मेरो कार्यकालमा पाँचवटा एजेन्डा थियो । नेपाल हाउस, एनआरएन दर्ता, सामुहिक लगानी, क्षेत्रीय संगठन विस्तार, वेवसाइट बनाउने । त्यसमा एनआरएन दर्ता र सामुहिक लगानीको काम छुट्यो । पहिलो प्राथमिकता नेपाल हाउसलाई दिदा एनआरएनको दर्ता गर्न सकिएन । नेपाल हाउस मात्र दर्ता गरियो । सामुहिक लगानीका कामचाहि संस्थागत कामहरु, सामाजिक कामहरुमा व्यस्त भएर समय नै पाइएन । सामुहिक लगानी गरेर तत्काल प्रतिफल दिने परियोजना पनि भेटिएन । लगानीको सुरक्षित क्षेत्र पनि भेटिएन देशका विभिन्न समस्याहरुले गर्दा ।
१०. अहिले जलविद्युत आयोजनाको काम लिएर आउनु भएको छ यो कस्तो परियोजना हो ?
अब एनआरएन कोरियाको कामबाट म फुर्सद भए । अब सामुहिक लगानीका लागि मैले काम गर्छु । अहिले लिएर आएको धौवलागिरी जलविद्युत आयोजना पिपिए लगायत सम्पूर्ण काम पुरा भइसकेको छ । २५ मेगावाटको यो परियोजनामा लगानी गरेर प्रतिफल राम्रो आउने–नआउने कुरा अध्ययन गर्दै छु । सम्पूर्ण प्राविधिक कुराहरु पुरा भएपछि लगभग एक महिना भित्रमा लगानीका लागि रकम उठाउने काम शुरु हुन्छ ।
११. अन्तमा के भन्नुहुन्छ ?
एनआरएन कोरियामा कुनै पनि व्यक्तिले विनास्वार्थले काम गर्छु भन्छ भने त्यसलाई अगाडि ल्याउनैपर्छ । सबैलाई म आग्रह गर्न चाहान्छु नेपाल अहिले ठूलो समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । विदेशमा बसेर हामी एकआपसमा खुट्टा तानातान गर्नु भन्दा हामीले देशका लागि के गर्न सक्छौ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भूकम्पपिडित र भारतको नाकावन्दीबाट थिलथिलो भएको मुलुकलाई हामीले विदेशबाट सहयोग गर्नुपर्छ । भत्किएका स्कूलहरु छन् त्यहाँ आफ्नो तर्फबाट सकेको सहयोग गर्न सकिन्छ । अब नेपालमा पुनर्निमाणको चरणमा हामीले आत्मनिर्भरताको बाटो खोजी गर्नुपर्छ । अन्तमा एनआरएन कोरियाको दोस्रो कार्यकालमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सामाजिक संघसंस्थाहरु, वुद्धिजीवी, व्यवसायी साथीहरु, पत्रकार सम्पूर्णलाई दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
प्रकाशित मिति : २०७२ कार्तिक ३० (November 16, 2015)